Yohane 14 NA-TWI - Yesu ne ɔkwan no - Yesu ka kyerɛɛ - Bible Gateway
Yohane 13Yohane 15
Yohane 14 Nkwa Asem (NA-TWI)
14 Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Mommma mo koma nntu. Munnye Onyankopɔn nni na munnye me nso nni. 2 Tenabea bebree wɔ m’agya fi, ɛno nti, merekɔ akosiesie baabi ama mo. Sɛ asɛm a mereka yi nyɛ nokware a, anka merenka nkyerɛ mo. 3 Na sɛ mekɔ na mekosiesie baabi ma mo a, mɛsan aba abɛfa mo akɔ na me ne mo akɔtena. 4 Munim faako a merekɔ no ne ɔkwan ko a mobɛfa so aba hɔ bi.”